warkii.com » Dhaqan-xumadii Uu Guendouzi Ku Sameeyey Tababarihii Dunida Baray Oo Bannaanka La Keenay
Dhaqan-xumadii Uu Guendouzi Ku Sameeyey Tababarihii Dunida Baray Oo Bannaanka La Keenay
Laacibka khadka dhexe uga ciyaara ee Arsenal ayaa lagu canaantay hab-dhaqanka xun ee uu lasoo baxay, waxaana lagu tilmaamay mid aan aan u wanaagsanayn kooxda iyo tababareyaasha midna.
Matteo Guendouzi ayaa mustaqbalkiisu mugdi galay markii uu Mikel Arteta ka tuuray kooxdiisa shantii ciyaarood ee ugu dambeeyey oo afar ka mid ah ay guulo xidhiidh ah gaadheen, waxaana xataa aan loo ogolaan Guendouzi inuu tababarka la qaato ciyaartoyda kale.
21 jirka reer France ayay ugu dambaysay inuu u ciyaaro Arsenal kulankii ay Brighton ku garaacday 2-1 bishii hore, markaas oo uu Matteo Guendouzi si dhaqan xumo leh ula dhaqmay Maupay oo lagu eedaynayay inuu dhaawacay goolhaye Leno.
Tababarihii hore ee kooxda Lorient, Bernard Casoni oo macallin usoo noqday Guendouzi ayaa canaan dusha uga tuuray laacibkan, waxaanu usoo jeediyey Arteta inaanu ciiyaarsiinin illaa inta uu beddelayo qaabka fikirkiisa. Dhibaatada Guendouzi maaha mid jidheed iyo farsamo. Waa hab-dhaqankiisa, umana fiicna kooxda iyo tababaraha. Aniga xidhiidhkii naga dhexeeyey muu ahayn mid wanaagsan.”
Bernard Casoni waxa uu ka warramay sidii uu Guendouzi u dhaqmay ciyaar ka tirsanayd French Cup oo ayla ciyaareen Nice, waxaanu yidhi: “Waxaan usoo xushay kulan aanu ka hor tagnay Nice, laakiin waqti hore ayaa isaga kaadh digniin ah la siiyey. Garsooraha ayaa waqtigii nasashada ii sheegay inaan u digo Guendouzi: hal qalad oo kale haddii aad gasho ciyaarta waa lagaa saarayaa, laakiin qaybtii dambe wax isbeddel ah muu samayn.
“Maan haysan doorasho kale oo aan ahayn inaan beddelo mooyaane. Markii aan soo beddelay wuxuu diiday inuu i salaamo.”
Si kasta oo uu dhaqankiisu yahay, Bernard Casoni wali waxa uu rumaysan yahay in Guendouzi uu yahay ciyaartoy sare oo shaqadiisa si wanaagsan u qabsada, tababarkana aan sagsaag iyo carqalad ku samayn, bale waxa uu usoo jeediyey inuu beddelo dabeecaddiisa.